Liliphi igama leholide ngo-Meyi 1?
Wonke umntu uyazi ukuba iMeyi 1 yimini ephumayo, kwaye yintoni ekugqibeleni ngoku kugubha ngalo mhla, abaninzi bethu abakucingi. Ixesha elidlulileyo laseSoviet lisikhumbuza uxolo nomsebenzi, kodwa igama likaMeyi uSuku aluyaziwa wonke umntu namhlanje.
Namhlanje, ngoMeyi 1 yiholide yentsasa kunye nabasebenzi. Kwabaninzi, abasebenzi basekuqaleni kukaMe banxulumene nomyezo kunye nefosholo, kodwa ngokwenene imbali yeeholide ayikho yonke into exhunyene nomsebenzi oqhelekileyo kuthi. Ngeli xestile le-XIX, usuku lokusebenza lwaluhlala ixesha eli-15. Le mihla yokusebenza yabangela imibhikisho e-Australia ngo-Matshi 21, 1856. Ukulandela umzekelo wase-Australia ngo-1886 i-anarchist iququzelele imiboniso efuna imihla engama-8 yokusebenza e-US naseCanada. Abasemagunyeni abazange bafune ukuvuma, ngoko ngoMeyi 4, amapolisa azama ukusabalalisa umboniso eChicago, oku kuphumela ekufeni kwababonisi abathandathu. Kodwa ukubhikisha akuzange kume apho, ngokuchaseneyo, abathathi-nxaxheba bathukuthele ukungabi namacala kwamapolisa, okugqithiseleyo ngaphezu kwegunya lawo. Ngenxa yoko, izibambano zaqala phakathi kwabakhokisi kunye namagosa karhulumente, okubangela amaxhoba amatsha. Ngexesha lokuxabana, ibhobho yaqhutyelwa, ininzi yabathathi-nxaxheba ekuchasene nayo yalimala, ubuncinci ama-polisa ase-8 kunye nabasebenzi aba-4 babulawa. Kwiintlawulo zokulungelelanisa ukuqhuma, abasebenzi abathandathu abavela kwinkqubela ye-anarchist bagwetywa ukuba babulawe, abathathu bamele bachithe iminyaka eyi-15 kwintlawulo yesigwebo.
NgoJulayi 1889, i-Congress yeParis yeBili yeziBini yaqhutywa, apho kugqitywe isigqibo sokuxhasa ukuhamba kwabasebenzi baseMerika naseKhanada, kwaye ivakalise ukucaphuka kwabo kwisigwebo sokufa kunye nokusetyenziswa okungafanelekanga kwamandla okulwa nababonisi. Emva kwemiboniso ephumelelayo efuna ukuzisa usuku lweeyure eziyi-8 kunye nokwenza olunye utshintsho lwezenhlalakahle, ngoMeyi 1 waba yeholide, ukukhumbuza impumelelo yabasebenzi kwimzabalazo enzima yamalungelo abo.
Iimpawu zangoMeyi 1
Ekuqaleni kwekhulu lama-20, uMeyi Usuku wadibanisa imiboniso yabasebenzi kwaye ngokuyinhloko yayingumhla wokubhikisha kunye nezivakalisi zezopolitiko. Ngexesha leSoviet, iimbonakaliso zagcinwa, kodwa iholide yaba sesikhulu, kwaye izivakalisi zayo zatshintshile, ngelo xesha abantu babancoma abasebenzi kunye nombuso. Namhlanje, phantse akukho nto ikhumbuza ngoluphi umhla ngoMeyi 1 ngaphambili, iholide elahlekelwe ngumbala wezopolitiko. Ngoku oku kukubhiyozela okuqhelekileyo, okuqhelekileyo kuqhutyelwa kwisangqa sabangani kunye nosapho, kwindalo okanye kwi-dacha.
Iholide yosuku lwentwasahlobo kunye nabasebenzi bayabhiyozelwa kumazwe angama-142, ngamanye amaxesha kubhiyozelwa ngoMvulo wokuqala kuMeyi. Amaqela amaninzi ahlala egcina isithethe ukulungiselela imiboniso ngeenkcazo zezopolitiko nakwizinto ezibukhali, kodwa abantu abaninzi kule holide ngoku badibaniswa kuphela nemikhosi yabantu, uhambo lwezoxolo, ii-fairs.
Kuyathakazelisa ukuba eUnited States iholide yomsebenzi ibhiyozelwa ngolunye usuku, nangona iziganeko zeli lizwe zaba sisizathu sesiseko sayo. IJapan ibuye ibe nomhla wayo wokubakho imicimbi ehloniphekileyo yabasebenzi, kwaye amazwe angama-80 akanalo iholide enjalo kwikhalenda.
Usuku lweMeyi linembali yobuhedeni. EYurophu yaseYurophu, ngalolo suku lwaqala ukuhlwaywa kwentwasahlobo waza wazama ukuncwina unkulunkulu welanga, emnika imibingelelo engokomfanekiso. KwiRashiya yangaphambi kokuguqulwa kweMeyi ngoMeyi 1, bhiyozela umthendeleko wehlobo lasekuqaleni. Abantu bakholelwa ukuba namhlanje unkulunkulu welanga uJarilo uhamba ebusuku eengubo ezimhlophe kwiindawo kunye namahlathi.
Namhlanje, ngoMeyi 1 ngumhla wamazwe ngamazwe entwasahlobo kunye nabasebenzi, iholide enembali enezityebi. Ngokuqinisekileyo, ngelixesha izithethe zale mini zitshintshile, ngoku iholide eqaqambileyo neyovuyo, akukho nto ifana neengxabano kunye nomzabalazo wabasebenzi ngamalungelo abo.
Oktobha 9 - Usuku Lomhlaba Weposi
Yintoni enokumnika umntu ngo-Eva wonyaka omtsha?
Ukuhlobisa i-Halloween ngezandla zabo
Usuku lukaSt. Anne
Usuku Lwemeyile Yehlabathi
Yintoni ozoyihambisa ngoMatshi 8?
Izipho zokuqala ngoMatshi 8
Ukubhiyozela Ubhaptizo lwaseRashiya
Usuku loMbulelo lwaMazwe ngamazwe
Matshi 25 - Usuku loMsebenzi weNkcubeko
Unyaka omtsha kwindlela yamaOlimpiki
Party Indian Party
Ukunyangwa kwama-papillomas kunye nezilwanyana zomntu
Ifomu ye pizza
Izigqoko zeChiffon 2014
Umqolo wesifo ubuhlungu kwintsimi
Iimidlalo zezemidlalo zezingane
Ingqiqo engama-21, engaziwayo kulutsha lwangoku
Kutheni i ngqolowa inenzuzo?
I-dystonia ye-Vegeto-vascular intsha
Kutheni iphupha lesanti?
Feng Shui emsebenzini
I-tilkalk tile yama-cottages
Unokukhetha njani iphepheni elungileyo?
Ikhekhe kunye ne-gooseberry - zokupheka ezona zihle kakhulu zeempahla ezahlukileyo zasekhaya
I-animism kwiingqondo kunye nefilosofi - inyaniso enomdla
I-Endometrium yinto eqhelekileyo